Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguVitória
Molo. Igama lam ndingu-Ícaro, usisi wam uVitória ngumnini wegumbi endinoxanduva lokulirenta. Sihlala kunye kunye neekati ezimbini.
Sirenta lonke igumbi ebumelwaneni baseTambaú, 900m ukusuka elwandle, (ekugqibeleni kweCabo Branco kunye neTambaú, enye yezona zinomtsalane kakhulu kuMntla-mpuma). Kufutshane, uya kuba neendawo zokutyela ezininzi, iivenkile ezinkulu, iikhemesti, iindawo zokubhaka nokunye okuninzi. Ukufikelela ngokulula kwiilwandle ezintle zonxweme olusenyakatho nasezantsi.
Ipatimenti ekumgangatho wesibini ka-Ed Brisas de Tambaú, enamagumbi okulala amabini ekuqeshwa kuwo elinye kuphela. Indlu nayo inegumbi lokuhlambela, igumbi lokuhlala, ikhitshi, igaraji kunye ne-balcony, amagumbi abelwe kunye nomnini, ngoko ke kuyimfuneko ukugqoka imaski.
Indawo ezolileyo, ethathwa njengekumgangatho ophakathi. Inazo zonke iindlela ezigangathiweyo okanye ezigangathiweyo, kwaye zibhalwe kakuhle kakhulu.
Kufuphi kukho iikhemesti, iivenkile ezinkulu, iimarike ezincinci, iindawo zokutyela, iivenkile zempahla kunye neempahla kunye nonxweme olukumgama we-900m. Ukongeza kwiindawo zabakhenkethi kunye nembali yesixeko, njengemarike kamasipala, imarike ye-tambau, phakathi kwabanye.
Umbuki zindwendwe ngu- Vitória
Iyafumaneka kuyo nayiphi na imibuzo kunye nemibuzo ephakanyisiweyo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tambaú